Ifulethi entliziyweni yeDorna kulawulo lwehotele - I-Airbnb
Ifulethi entliziyweni yeDorna kulawulo lwehotele
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo yabahambi ngeenyawo eVatra Dornei. Yindawo apho kusasa ungayonwabela ikofu, iintaba zaseDornei kunye newotshi edumileyo yeVatra Dornei. Kufutshane kukho ithambeka lokutyibilika, iivenkile kunye neeresityu ezinomculo ophilayo kunye nokutya okunje ekhaya.
Indlu (70sqm), ebekwe ecaleni, kunye okulala amabini kunye igumbi lokuhlala ezibuya 35sqm open kunye nekhitshi mihla kunye ngeketile yombane, ngetoaster yaye zonke izitya, amacephe, iiglasi okanye neendebe ufuna sakusasa okanye isidlo. Ikofu, iswekile kunye neti zezasekhaya.
I-Vatra Dornei yindawo yeentaba eyaziwayo ngamathuba ahlukeneyo okuchitha ixesha elikhululekile kunye nemisebenzi yokhenketho esebenzayo enezinga eliphezulu le-adrenaline:
Isitulo sikaVatra Dornei:
Yakhiwa izihlalo 120 kunye izihlalo 2 nganye. Ixesha ekunyukeni le mizuzu engama-25. Isiseko eqala ngomhla Negresti Street noseko ugqibezela kwi ukuphakanyiswa liphezulu kwentaba 1300m. Mhle Dornelor ukuxinezeleka yonke, kunye Rodna Mountains kunye Calimani kwiiNtaba.
I-Rafting Dorna Adventure:
Ukuhamba ngesikhephe eDorna okanye eBistrita
Intsomi ka-Count Dracula yaphenjelelwa bubuhle kunye nokungalawuleki kweeNtaba zeBârgău, kwaye uBram Stocker wabeka ulungelelwaniso lwejografi yeziganeko kwincwadi yakhe kanye eBistriţa-Năsăud.
Ke, ukuba ufuna ngokwenene ukulandela emanyathelweni kaDracula, kufuneka uze eBistrita-Nasaud.
Ihotele iCastel Dracula ifumaneka kwiPasi yeTihuta kwiiNtaba zeBârgăului, ePiatra Fantanele, kwi-1116 m.
Enye yezona zinto zimnandi kwaye zifikeleleka zokuzonwabisa ezinokuthi zenziwe ngexesha lasebusika kwi-resort yaseVatra Dornei yi-skiing.
Indawo yokuphumla yaseDorna ibonelela ngabatyibilizi kwiindawo ezi-4 ezithambeka.
Iqela likaDealu Negru
I-Dealu Negru ski slope ithatha indawo yesibini kwilizwe lethu, kunye nobude be-3000 m. Ineqondo eliphakathi lobunzima kunye neenzuzo zokuthutha ikhebula.
Ulwazi lwethambeka leDealul Negru:
Ubude: 3200 m
Umahluko wenqanaba: 400 m
Iqondo lobunzima: eliphakathi
Iimpawu zokuphakamisa usihlalo:
Ubude: 3 km
Ixesha lokunyuka: 50 min
Umthamo: 200 abantu / iyure
Ukuphakama kwesiseko: 860m
Incopho yokuphakama: 1301m
Inani lezihlalo: 200 (x2 izihlalo)
NgoMvulo-ngeCawa: 10.00 - 17.00
Umgama ukusuka kwisiseko se-slope ukuya kwi-slope yePaki (umbindi we-resort) igutyungelwe malunga nemizuzu eyi-15-20 ngeenyawo.
I-slope ye-Veverita ski e-Vatra Dornei yavulwa kwi-2011, ixhamla ekukhanyeni ebusuku kunye nokufakwa kwemveliso yekhephu eyenziweyo. Ukufikelela kufakelo lwezothutho kusekelwe kwi-ski pass.
Ulwazi lokutyibilika kwe-Squirrel:
Ubude: 850 m
I-avareji yobubanzi: 35 m
Umahluko wenqanaba: 180 m
Abakhenkethi banazo iziko lokurenta izixhobo zemidlalo, iindawo abanokuthenga kuzo amashwamshwam kunye neendlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa (phakathi kwezo zisebenza ebusika, irenki yokutyibiliza kufuneka ikhankanyiwe).
I-slope isebenza yonke imihla, phakathi kwe-09:00 kunye ne-17:00.
I-slope inobude beemitha ze-780 ngokolwazi olusemthethweni (i-850 yeemitha ngokwemidiya), umehluko wezinga leemitha ezili-180 kunye ne-gauge ye-2.5 yeemitha. I-squirrel slope ikhanyisa ebusuku ngoncedo lokufakela ubusuku banamhlanje kwaye ibonelelwa ngokufakela ukufakwa kwe-ski lift ephezulu kunye nomthamo wokuthutha abantu be-900 ngeyure, kunye neenqwelo zekhephu.
Icandelo 1 Ipaki
I-ski slope i-Parc 1 ukusuka kwi-resort ye-Vatra Dornei inobunzima obuphakathi kobunzima, ijoliswe kwi-skiers ephakathi, kwaye ubude bayo buyi-900 m. Ngenye yezona ndawo zityelelwe kakhulu kwi-ski slopes enyakatho yelizwe.
Ixhamla kubomi basebusuku, iinkanunu zekhephu ezenziweyo, kunye nokufikelela kwizibonelelo zothutho (ukunyuswa kwe-ski) kusekwe kwi-ski pass. Kwisiseko sethambeka kukho umkhondo wekhephu kunye nesikolo se-Euroski ski. Apha kukwalapho "iiHolide zekhephu" ziququzelelwa minyaka le.
I-Park 1 ulwazi lwe-ski slope:
Ubude: 900 m
Ubude bokuhamba: 965 m
Ukuphakama kokufika: 805 m
Umahluko wenqanaba: 160 m
Ufakelo lwemoto yekhebula: I-1 yezihlalo ezibini zokunyusela i-ski, i-1 yokunyusa umntwana
Vatra Dornei Park Ski Lift:
Isantya sokuhamba: 1.2 m / s
Ubude bendlela: 230 m
Umthamo wesixhobo: umntu o-1
Umgama phakathi kwezixhobo: 20 m
Ubude: 775.5 m
Umahluko wenqanaba: 157.1 m
Umyinge wotyekelo: 20.26%
Ubude kwithambeka: 791.25 m
Igeyiji yomgca: 2 m
Isantya sokusebenza: 2.5 m / s
Inani le-hangers: 60 pcs
Uhlobo lwehuka: ibiped
Umgama phakathi kwama-hangers: 26.7 m
Icandelo 2 Ipaki
I-Parc 2 ski slope ibekwe ngasentla kweParc slope, idibanisa nayo kunye ne-Squirrel slope. Kunconywa kubaqalayo be-skiers, ngeqondo eliphantsi lobunzima. Inobude beemitha ezingama-550 kunye nokwahlukana kwenqanaba leemitha ezingama-50 kuphela. I-slope ixhamla kufakelo lwekhephu olwenziweyo kunye nokuthutha intambo. Ukufikelela kufakelo lwezothutho kusekelwe kwi-ski pass.
Ulwazi lwePaki yesi-2 yeSki
Iqondo lobunzima: kulula
Ubude: 550 m
Ubude bokuhamba: 1,010 m
Ukuphakama kokufika: 910 m
Umahluko wenqanaba: 100 m
Ufakelo lwemoto yekhebula: Ukunyuswa kokutyibilika kwesihlalo esinye
Amanqaku aphambili omdla abekwe kumda wepaki zezi:
-Ingcwele kaBathathu Emnye Cathedral
- Iflegi yaseJapan
- Sentinel Spring Building
- Iqela eliqingqiweyo kwi-alley ephambili kunye neebhasi zikaMihai Eminescu, u-Ion Luca Caragiale, uMihail Sadoveanu, uGeorge Enescu, uCiprian Porumbescu, uMihail Kogălniceanu, uCostache Negri noAlecu Russo.
Kwakhona apha, kanye ecaleni kwepaki, yi-Casino - isikhumbuzo sembali esakhiwe ngo-1896, esizalisekise imisebenzi emininzi ekuhambeni kwexesha: iholo lokungcakaza, iholo yekonsathi kunye neholo yokusebenza, kunye neklabhu yabasebenzi. Ngelishwa, esi sakhiwo sithetha nje sikwimeko embi.
Ngexesha lasehlotyeni, iikonsathi zilungelelaniswe epakini, ezixhaswa yiokhestra yobhedu, isiganeko esihlanganisa amakhulu abantu.
Le paki, ngoku eyaziwa ngokubanzi njenge “Squirrel Park,” sele idumile ngenxa yokuba inkitha yoonomatse ilindele abantu ukuba beze kuyiphakela. Abantwana, abantu abatsha, abantu abadala kunye nabantu abadala bahlanganisana yonke imihla ukuze babaphathele amantongomane kunye neehazelnuts. Kubakhenkethi, iingxowa zamandongomane zithengiswa ekungeneni epakini. Ukubizela kuwe kulula: ukubetha amantongomane phakathi kwabo, kwaye ii-squirrels ezincinci ziza kwaye zithathe ukutya kwazo ngokuthe ngqo esandleni sakho, zibe luvuyo lwamehlo onke.
Ama-squirrels abizwa ngokuba yi "Mariana", kwaye abantwana, ngakumbi ehlotyeni, babiza ngaloo mini nangokuhlwa. Ukubetha kwamantongomane kuvakala ngokuqhubekayo kude kube ngokuhlwa.
Ukukhwela ibhayikhi entabeni:
Ukuhamba ngebhayisekile eNtabeni eVatra Dornei resort-enye yamathuba okuzonwabisa aya kukuzisa kwinqanaba eliphezulu leadrenaline. Indlela yokuhamba ngebhayisekile yeentaba yiVatra Dornei - Rusca - Giumalau Chalet - Giumalau Peak - Obcina Mare - Vatra Dornei.
Ubude: 45 km
Uhlobo: I-15 km ye-asphalt, i-15 km yendlela yehlathi, i-15 km ngaphandle kwendlela
Ixesha eliqikelelweyo: iiyure ze-5-6
Iingcebiso: Uhlobo lwebhayisekile: i-hardtail eyaneleyo, ukumiswa okupheleleyo kunconyiwe. Kuyacetyiswa kumaqela abakhweli beebhayisikile abangaphezu kwesithathu. Isigcina-ntloko sinyanzelekile, ukuba ukhuseleko lokukhanya lukhona (i-armrests, i-knee pads).
Iqondo lobunzima: phakathi ukuya kunzima
Ngaphandle kwendlela kwiiNtaba zeBucovina:
Iindlela ezinde nezidiniweyo zinokugutyungelwa kwiiyure ezimbalwa ngeemoto ze-4x4, ukuze wonke umntu abonelele ngeendawo ekunzima ukufikelela kuzo.
Sifuna ukukunika amava afudumeleyo napholileyo, ithuba lokuphumla kunye nokutshaja iibhetri zakho.
Indawo yabakhenkethi yaseTelescaun inika abanqwenelekayo inxalenye yetyhubhu eyenziweyo unyaka wonke, ehanjiswa libhanti lokuhambisa.
Ukuba ubumazi uBucovina ngokwesiko, ngeenyawo okanye ekuleqeni imoto, kwaye ngoku ufuna enye into ... emva koko uye eFLORENI Aerodrome (iikhilomitha ezili-12 ukusuka eVatra Dornei) ukuncoma ubuhle beDornelor Depression kwinqwelomoya. Uyakuthatha amanyathelo okuqala ekufumaneni ilayisenisi yokuqhuba inqwelomoya ekhaphukhaphu kakhulu, emva kokwazisa iziseko zemigaqo yokubhabha, ukuhamba emoyeni kunye nobuchule bokuqhuba. Emva koko, emva koqeqesho olufunekayo lokulungiselela, umqhubi uya kufundisa ngokunyanisekileyo oko akufundileyo, ebonisa ukusuka kwiimitha ezingama-600 ubude (!!!) indawo kunye nezona njongo zibalulekileyo ezibonakalayo ukusuka emoyeni.
Ubude bexesha lokuhamba ngenqwelomoya yimizuzu engama-20 ubuncinci (ixabiso le-10 RON / umzuzu), ngelo xesha uya kuba nethuba lokuthatha uhambo oluya kwindawo ethe nkqo kwindawo yokuphumla yaseDorna okanye ukubhabha ngaphaya kweenduli ezinamahlathi akufutshane. Iingcebiso zethu: ukhenketho lwasemoyeni kwisitya saseDornelor, kwimizuzu engama-30 yokudityaniswa nesibhakabhaka!
Lichibi eliyingqokelela elenziweyo elisuka kwiiNtaba zeCălimani, kwiNqila yaseBistrița-Năsăud.
I-Vatra Dornei resort inesithethe esityebileyo ekuphatheni izifo ngoncedo lwamanzi amaminerali. Amanzi amaminerali kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kunye nalawo akwi-Dornelor Basin "yizinto eziluhlaza" kumawaka eenkqubo ezenziwa kwiziseko zonyango lwanamhlanje.
Nezihlwahlwazayo, hypotonic, athermal, nebhiKharbonati sodium, calcium kunye namanzi kwezimbiwa ferruginous. Kabi kwi Iacobeni areaTonic bioclimate, ivuselela kunye nombala umthomalalisi. Ukugxininiswa okuphezulu kwee-aeroons ezimbi.
Umgodi wetyuwa weCacica yindawo enomtsalane kubakhenkethi ethe yatyelelwa ukusukela phakathi kwinkulungwane. Ngenkulungwane ye-19, kwindlela emfutshane, egcinwe kude kube namhlanje.
ISalina Cacica ikwindawo yegama elifanayo, kumbindi-mpuma wesithili saseSuceava County, kumazantsi empuma yeObcina Mari.
Ukuba ufika eBucovina, ngaphandle kweemonki ezidumileyo ezipeyintiweyo, akufanele uphoswe luhambo olulodwa kunye noMocanita waseMoldovita - Hutulca, njengoko abantu bendawo beyibiza njalo. Uloliwe omdala womphunga uya kukuthatha uhambo oluzolileyo nolungenakulibaleka, kwilizwe le-fairytale lamaHutus, abantu baseUkraine abazidlayo.
Kufana nokugqobhozela kwixesha elidlulileyo, kwiilali zabo, ezinezindlu ezintle, ezigudle uMlambo iMoldovita. Kuzo zonke iikona, kuzo zonke iikona, ngokuqinisekileyo uya kuba nento oyibonayo kwaye uyifote!
I speak Greek and English language. I have lived abroad and travelled in foreign, sunny countries.Now, I have retired and I live in a small town near Colibita lake.
Reducere 20% pentru ședere de o saptamana.
Ndiyakwazi ukuphendula ifowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vatra Dornei